Fanoherana… fanakorontanana | NewsMada
Na inona mitranga sy atao amin’izao fotoan-tsarotra diavina izao, tsy mety amin’ny mpanohitra avokoa ka itenenany? Na izay tsy mety aminy no itenenany… Izay ny hoe fanoherana politika? Eny, na misy karazana aza ny mpanohitra: tsy mifankahazo tanteraka, tsy mitovy fijery. Tsy mahagaga raha tsy misy fiovana firy ny tontolo politika, ny fomba fanaovana politika, ny mpilalao fa tsy mpanao politika.
Resahin-dava sy zary ifamandrihana ny amin’ny hoe fanoherana ho amin’ny fanorenana sy fanatsarana ary fampandrosoana amin’ny fitantanana. Eo koa ny hoe ilaina ny fahamarinan-toerana politika hisian’ny filaminana maharitra hahazoana mampandeha sy manatratra izay fampandrosoana izay. Miara-dalana amin’izany ny hoe fifandimbiasam-pahefana mazava sy milamina amin’ny alalan’ny fifidianana.
Saingy tsy izany loatra no mitranga sy iainana amin’izao. Na hoe misisika amin’ny fanoloran-kevitra aza ohatra, ny sasany, mifono fandrika sy fitaka be ihany noho ny kajikajy sy paipaika politika. Na inona mitranga sy atao rehetra, tsy mety avokoa amin’ny mpanohitra. Tsy fifampihainoana no vokany, fifampiandrasana kendry tohina… Tonga hatramin’ny fifanenjanana sy fifanenjehana an-toerana aza.
Anisan’ny fototra sy fositra mahatonga izany rehetra izany ny tsy fiheverana izay tena soa iombonana. Ny tombontsoa manokana no mahadotra ny sasany amin’ny hoe politika? Eo koa ny tsy fijerena lavitra amin’izay mahasoa ny firenena sy ny taranaka ho avy. Izay hahazoana fahefam-panjakana anio dia anio no mahamaika? Tsy atao mahagaga raha zary tarazo ratsy efa ho lava ny fanoherana… fanakorontana.
Eo ny fanelezana vaovao tsy marina amin’izany, ny fanaratsiana izay mitranga sy atao, ny fankahalana… Ahoana ny fanoherana… fanakorontanana? Na izay hanoherana izany… Tsy misy afa-tsy ny fanohizana ny asa natomboka. Raha ilaina, raisina izay azo raisina amin’izay lazain’ny mpitsikera… handrosoana. Misy hatrany ny azo tsikeraina. Ndeha hampihemotra amin’izay atao ve izany na hifamaliana lava?